Kuşak Yol’un Ülke Ülke Simge Projeleri – RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaMashaariicda Waddanka Icon ee Dalka
10 / 10 / 2019 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline
Waxaan soo uruurinay maalgashiyada ugu caansan ee maalgashiga Shiinaha ee dalal badan oo ka dhex jira mashruuca Belt Road
Jamhuuriyadda Dadweynaha Shiinaha waxay ku maalgelisay balaayiin doollar dalal badan gudaha mashruuca Belt Road, kaasoo la hirgaliyay ilaa 2013. Waxaan soo uruurinay kuwa u yimid inay astaan ​​u noqdaan maalgashiga ka imanaya Afrika illaa Yurub iyo Aasiya ilaa Bariga Dhexe.
Turkey: Shiinaha, oo lammaane ku leh Magaalada Kumport Port ee Avcılar, ayaa raba inuu saami ka helo dadka reer Talyaani ee ku yaal Buundada Yavuz Sultan Selim. Dhismaha warshad koronto kuleylka 1.7 $ ee Adana ayaa la bilaabay. 2005-2018 dhexeeya Shiinaha, Turkey si 15 billion $ maalgashi lagu sameeyo dhow.
Greece: Piraeus, waa dekada ugu weyn dalka ee ku dhow Athens, caasimada, waxaa laga iibiyay shirkada China ee Cosco Group Limited.
Italy: Wadahadalada ayaa socda oo ku saabsan iibinta Dekadda Trieste ee u dhaxaysa Talyaaniga iyo Shiinaha, xubinta ugu horeysa ee G7 ee aqbashay Jidadka.
XIDHIIDHKA UGU DANBEEYA DHEXE
Iran: Qadka tareenka oo ka yimid magaalada Urumqi, oo ah magaalo madax u ah gobolka Xinjiang Uyghur, kuna sii jeeday Tehran, caasimada Iran, ayaa la soo gabagabeeyey. 2 kun 300 kiiloomitir oo ah adeegyada tareenka xamuulka qaada ayaa bilaabmay. Khadku wuxuu kaloo Iran xiriir la leeyahay Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan iyo Turkmenistan.
Sacuudi Carabiya: Maamulka Riyadh wuxuu aasaasay Istaraatiijiyadda Qaranka ee 2030 sida uu sheegayo Wadada 'Generation Road'. Khadkii Xawaaraha Sare ee Harameyn, kaas oo yareyn doona Makka-Madiina inta u dhaxaysa saacadaha 1, waxaa dhistay shirkadaha Shiinaha.
Imaaraadka Carabta: Wadanka Shiinaha wuxuu iskaashi la yeeshay shirkadda saliida rasmiga ah ee waddanka. Cabbirka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal, oo ahaa 2010 bilyan oo doolar gudaha 17, wuxuu gaadhay 2017 bilyan oo doolar 60. Shirkadda Shiinaha ee Yiwu waxay dhiseysaa xero xero oo 2,4 bilyan doolar ah iyo dekedo ku yaal aagga dekada Cebel Ali.
Israa'iil: Wadahadalka ganacsiga xorta ah ayaa socda inta udhaxeysa Beijing iyo Tel Aviv.
KU SOO DHAWEYNTA XUDUUDAHA ASIANKA DHEXE
Kazakhstan: Gobolka Horgos waa xarunta tareenka laga bilaabo Shiinaha ilaa Amsterdam. Khad tareenka bilyanka ah ee loo yaqaan '1.9 billion dollars', kaas oo dhismihiisa lagu taageerayo Shiinaha, ayaa la filayaa inuu sannadka dambe ka furmo caasimadda Kazakhstan.
Kyrgyzstan, Bilyan 1.3 bilyan oo doolarka Shiinaha ah oo ku saleysan 4 mashruuc ugu weyn ayaa laga fulinayaa Kyrgyzstan. Mid ka mid ah kuwan waa shaqada wadada weyn ee ku socota Narın, 520 kiiloomitir u jirta caasimada Bishkek.
Tajikistan: Maalgashiga Shiinaha wuxuu ku kordhay 160%. Sannadkii 20 ee la soo dhaafay, Shiinuhu wuxuu bilaabay in kabadan 50 mashaariicda waaweyn ee Tajikistan. Kuwaas waxaa ka mid ah maalgashiga sida Llazor-Khatlon iyo khadadka tamarta ee Waqooyiga-Koonfur, wadooyinka, tunnel-ka wadada u dhexeeya Dushanbe iyo Kulyap, iyo Vahdat-Javan.
Turkmenistan, Shirkadaha Shiinaha waxay maalgashadeen $ 4 bilyan. Xaqiiqda ah in Turkmenistan ay xiriir tareen la leedahay Shiinaha iyada oo loo sii marayo Kazakhstan waxay sii waddaa inay sii xoojiso jiilka qarniyada wadooyinka.
Uzbekistan: Ganacsiga Shiinaha wuxuu ka sarreeyay 6.4 $ bilyan. Dhismaha xarunta ganacsiga ee '344 billion dollars' ee Tashkent ayaa lagu wadaa inuu maro khadka tareenka xawaaraha sare ee 1.7 kiiloo mitir.
Nigeria: Bilyan 12 bilyan oo Doolar Xeebta Xeebta ah ayaa la dhisay.
Itoobiya: Bilyan 4.5 bilyan doolar Addis Ababa-Djibouti Railway ayaa la dhisay.
Tansaaniya: Bilyan 11 bilyan doolar dekeda Bagamoyo ayaa la fulinayaa.
Zambia: Gaaritaanka Badda Cas waxaa bixiya Gacanka Cadmeed. Goobta xigta waa khadka tareenka ee Zambia - Tansaaniya.
Kenya: Iyada oo ay ku jirto sanduuqa Exim Bank ee Shiinaha ee 'bilyannada' 1.5 bilyan ee doollarka ah, khadka tooska ah ee u dhexeeya Nairobi iyo Mombasa ayaa loo fidiyaa Kisumu. Khadkan waxaa loo qorsheeyay in lagu fidiyo Uganda iyo South Sudan. Mashruuca ka dambeeya Shiinaha, 5 wuxuu isku xirayaa waddamada Afrika Kenya, Rwanda, Ugaandha, Burundi iyo Koonfurta Suudaan.
Angola: Toddobaadkiiba safar shaqo oo ku-meelgaar ah ayaa ku soo degay Shiinaha maalmo kooban oo leh kun xNUMX kiiloomitir kiiloo-tareenka Benguela ah.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo: Qadka tareenka ee loo maro Katanga ayaa beddelay habka macdanta, kaasoo muhiim u ah adduunka tikniyoolajiyadda gobolka. (Çinhab waa)
SIMGE Warshadeynta warshadaha iyo ganacsiga. STI. InnoTrans waxay soo xaadirtay 2012 Fair
InnoTrans 2012: Calaamadda Isku-dhejinta Warshad ayaa sugeysa Soo-booqdayaasha
Goobaha Itobiya ee Icon waxay ahayd Taariikhda Wagon Cafe
Khadkii Xawaaraha Sare ee Harameyn
Mashaariicda Wadada Xadka